06/06/2018 - Page 4 sur 4 -
« Diso lalana »
06/06/2018 admintriatra 0
Niaiky ny rehetra fa nanapotika ny fianaran’ny zanaka malagasy fotsiny ny fitarihana azy teny amin’ny kianjan’ny 13 mey. Rakotra fanakianana ireo olona mpitarika ireo ankizy mpianatra nanatevin-daharana teny an-kianjan’ny Parvis Analakely ny tambazotran-tsosialy hatramin’ny omaly …Tohiny
Kaomina Fiombonana Atsimondrano : Zazalahy 70 vita famorana faobe
Kolontsaina mampiavaka antsika Malagasy ny fanaovana didim-poitra. Tsy maintsy tanterahina izany na sahirana na tsia ny ray aman-dreny. Handaniam-bola tokoa mantsy ny fanaovana azy ireny. Ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny dia nisy ny fikarakarana …Tohiny
Hanomboka anio izany ny fanombohan’ ny asan’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana Christian Ntsay sy Olivier Mahafaly Solonandrasana izay praiministra teo aloha. Raha ny fantatra dia amin’ ny sivy ora no voatondro hanatanterahana izany eny amin’ …Tohiny
Diso tanteraka ny fandraisan’ny vahoaka malagasy ny fihetsika nasehon’ny Mapar teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai nandritra ny fitokonana notarihin’ireo depiote miisa 73. Maro tokoa mantsy no nihevitra fa dia ny hanongam-panjakana mihitsy no tanjon’iny fitokonana …Tohiny